Mogadishu Journal » 2019 » April » 14
Mjournal :-Wasiirka Amniga maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeyn ka dhacday gobolka Bari in lagu dilay ku xigeenkii hogaamiyaha Daacish Cabdixakiin Dhoqob. Wasiirka waxaa uu sheegay in duqeynta ay si gaar ah uga dhacday Tuulada Xiriiro ee Duleedka Degmada Isku-Shuban ee...
Mjournal :-Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa ku dhawaaqay inuu qaban doono doorashada boos buuxinta kuraasta ka bannaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo degaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Doorashada Kuraasta ka bannaan Golaha...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, mudadii uu joogay dalka Maraykanka waxa uu kulumo kala duwan la yeeshay dowladda Mareykanka, gaar ahaan Aqalka Cad, Wasaaradda Arrimaha Dibedda, Wasaaradda Gaashaandhigga, Wasaaradda Maaliyadda iyo USAID, waxayna isku afgarteen in la...
Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay halka uu marayo qorshaha deyn cafinta
Mjournal :-Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo kamid ah Wafdiga Ra’iisul wasaaraha XFS ee magaalada Washington ku sugan ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay inay ka soo baxdo dhamaan shuruudihii...
Mjournal :-Xarunta Golaha Shacabka waxaa Goordhow ka furmay kulanka xildhibaananda Baarlamaanka,iyada oo Maanta su’aalo kulanka lagu weeydiinayo Taliyeyaasha Ciidamada iyo Wasiirada amniga iyo Gaashaandhigga oo kulanka goobjoog ka ah. Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa inta...
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in howlgalka Millateri ay ka wadaan Gudaha Soomaaliya ay qaadan doonto mudo 7 Sano oo horleh, isla markaana dhowrkaas sano lagu soo afjari karo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaad ka hor saxiixay Wareegto uu mudo hal...
Mjournal :-Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo ka mid ah howlgalka AMISOM lagula eegtay deegaan u dhow degmada Ceel-Barde ee Xarunta Gobolka Bakool. Kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen...
Mas’uuliyiinta Hay’adaha Amniga oo Maanta hortagaya Golaha Shacabka
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Maalintii labaad oo xiriir ah waxa ay maanta kulan aan caadi aheyn ku yeelaan doonaan Xaruntooda Golaha Shacabka ee Magalada Muqdisho,waxaana hortagaya Mas’uuliyinta Hay’adaha Amniga. Shalay oo Sabti aheyd ayaa Xildhibaanada waxaa ay...
Mjournal :-Hogaamiyaha golaha milateriga ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa waxa uu wacad ku maray inuu “xididdada u siibi doono maamulkii hore” laba maalmood un kaddib markii uu dhacay afgambigii milateriga. Isagoo ka hadlayay taleefishinka ayuu Janaraal Cabdulfataax...
Shirweyne looga dhawaaqay Magalada Muqdisho, kadib dilalkii ka dhacay
Mjournal :-Imaam Maxamed Yuusuf Cali oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay shirweyne lagu qabanayo Magalada Muqdisho kaas oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka jira Magalada Caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa uu walaac ka muujiyey dhibaatooyinka dilalka...
Wasiiro Heer federaal iyo Heer Dowlad Goboleed oo shir uga socdo Muqdisho
Mjournal :-Shirkan wadatashiga ah ee ku aadan ka jawaabista gargaarka deg dega ah una dhexeeya madaxda wasaaradaha gargaarka heer Federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay Muqdisho,kaasi oo socon doona mudo labo casho ah. Shirkan inta uu socdo waxaa diiradda lagu saaraya...
Diyaaraddo Waxyaabaha Qarxa ku tuuray degaano ka mid ah Somaliland
Mjournal :-Guddoomiyaha Degmada Sallaxley oo ka tirsan gobolka Maroodi-jeex Ismaaciil Yuusuf Xuseen (Shiine), ayaa u sheegay Warbaahinta qaar ee degaanada Somaliland in diyaarado dagaal oo joog hoose ku duulayaa ay waxyaabo qarxa ku tuureen jees reer guuraa ah iyo dhul...